1 Bed Flat Iyathengiswa E-East London, London
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » London » 1 Bed Flat Iyathengiswa E-East London, London1
United Kingdom, London, East London, Stratford, E15 2nh
Ikhodi Yokuposa: E15 2nh
Izici: River view, Shops and amenities nearby, Video Entry, Fitted Kitchen, Double glazing, Close to public transport, City Centre, Perfect For Students, Smart Design, Great Location, Immaculate Condition, Communal Garden, Newly Refurbished, Balcony
I-One Move Group iyaziqhenya ngokwethula emakethe leli fulethi elihle lokulala eli-1 elisendaweni eyaziwayo yeZone 2 Stratford Mill. IStratford Mill izoba yindawo entsha e-East London, esemseleni futhi eseduze neQueenElizabeth Olympic Park. Ingadi yethu yangemuva iyindawo enkulu eguquliwe equkethe imigwaqo yamanzi, ipaki enamabala, ezokungcebeleka, ezokuthenga, izixhumanisi zesitimela ezihamba njalo nezisheshayo kanye nezikhungo zemidlalo, ezazenzelwe iMidlalo Yama-Olimpiki yaseLondon ngo-2012. Indawo esha sha yaseLondon ivela enhlizweni esezingeni lomhlaba, ezemidlalo kanye nemfundo.Isiteshi iPudding Mill Lane singamamitha amabili ukusuka eStratford Mill esixhumene neCanaryWharf neLewisham ngomugqa we-DLR. Isiteshi saseStratford sihamba ngemizuzu engama-20, ngokuxhumanisa okuqonde ngqo eLondon Bridge, Liverpool Street, Bank naseLondon City Airport ngeCentral, Jubilee, DLR Lines. IStratford Mill ineziteshi ezintathu ngaphakathi kwebanga lokuhamba. Okuseduze kakhulu yiPudding Mill Station exhunywe ngqo eStratford naseCanary Wharf ngomugqa we-DLR. Ikhaya ngalinye eStratford Mill linikezela kuvulandi omkhulu wangasese onokubukwa kwe-Olympic Park, umsele noma izindawo zomphakathi. Ingena egumbini lakho lokuphumula ukuze wakhe isikhala soketshezi esilungele ukuhlala nohlelo oluvulekile lokuphila. Qedela nge-5 amp ukukhanyisa isifunda, uphahla lwangaphakathi olungu-2.5m kanye neminyango egcwele ubude, amakhaya ethu anokuzwa okukhanyayo nomoya okulungele ukusingathwa komndeni nabangane.
, E15 2nh
&nbspEast London in London, E14 8jx
&nbspEast London in London, E9 7sg
&nbspEast London in London, E17 5py
&nbspEast London in London, E14 9sh
&nbspEast London in London, E1 0az
Izikole eziseduzane E15 2nh